Hey’adaha amniga Soomaaliya oo baaritaano xoog leh ka wada xaafado ka tirsan magaalada Muqdisho. – Soomaali 24 Media Network
Hey’adaha amniga Soomaaliya oo baaritaano xoog leh ka wada xaafado ka tirsan magaalada Muqdisho.
Wararka laga helayo qaar ka mid xaafadaha degmooyinka gobolka Banaadir ayaa sheegaya in halkaasi ciidamada amnigu ay baaritaano ka wadaan habeenkii labaad.
Ciidamada Nabad-sugidda iy Booliska ayaa baaritaano xalay ka sameeyey qaybo ka mid ah xaafadaha degmada dharkeenleey ee Gobolka Banaadir waxaana intii uu hawl galku socday lagu soo qabqabtay dhalinyaro aad u fara badan inkastoo badankood markii danbe la sii daayey.
Dadka deegaanka ayaa ku sheegay nuuca hawl galada kuwo ay ciidamadu gudaha u galayaan guryaha si ay guri guri ugu baaraan ayadoo meel barxad ah dadka la iskugu keenayo ka dibna dhalinyarada lagala baxayo inta kalena la sii deynayo.
Taliska Booliska Soomaaliya ayaa sheegay in hawl galadaan ay si wada jir ah uga socdaan degmooyinka Heliwaa, yaaqshiid, Dayniile iyo Dharkeenleey waxayna sheegeen in ay gacanta ku hayaan tiro ku dhaw 70 qof oo looga shakisan yahay inay xiriir la leeyihiin Al-shabaab balse uu weli baaritaan ku socdo.
Baaritaanada ayaa saamayn ku yeeshay isu socodka xaafadaha uu ka socdo xilliga fiidkii ah waxaana sidoo kale mid mid loo baarayaa Baabuurta iyo Bajaajyada.
Baaritaanada ayaa ku soo aadaya xilli bilihii la soo dhaafay ay Al-shabaab falal argagaxiso ka fuliyeen magaalada Muqdisho ee caasimadda wadanka Soomaaliya.
Previous Xasan shiikh” Dalkaan 21 sano ayuu kaligi talis haystay dhibkiisiina wali lagama soo kabsan haddana xoog iyo gacan bira kuwa ku goodinaya ayaa raba inay nugu celshaan.
Next Shirweynaha Badqabka Fikirka iyo la dagaallanka Xagjirnimada oo maanta ka furmaya magaalada Muqdisho.